कसरी गैर-गेमि Bra ब्रान्डहरूले गेमि Inf इन्फ्लुएन्सरहरूसँग काम गर्दा फाइदा लिन सक्छ Martech Zone
कसरी गैर-गेमिंग ब्रान्डहरूले गेमि Inf इन्फ्लुएन्सरसँग काम गरेर फाइदा लिन सक्दछ
बिहीबार, जुन 24, 2021 बिहीबार, जुन 24, 2021 पोलिना हरियाचा
गेमि influence प्रभावकर्ताहरू बेवास्ता गर्न गाह्रो भइरहेका छन्, गैर-गेमिंग ब्रान्डहरूको लागि पनि। त्यो अनौंठो लाग्न सक्छ, त्यसो भए हामी यसको कारण वर्णन गरौं।
धेरै उद्योगहरू कोविडको कारणले ग्रस्त भए, तर भिडियो गेमि exp विस्फोट भयो। यसको मूल्य प्रक्षेपण गरिएको छ २०२200 मा २०० बिलियन डलर पार गर्नुहोस्, विकास अनुमानित द्वारा संचालित २.2.9 बिलियन गेमरहरू विश्वव्यापी रूपमा 2021 मा।
ग्लोबल खेल बजार रिपोर्ट
यो संख्या मात्र होईन जुन गैर-गेमिंग ब्रान्डका लागि उत्साहजनक हो, तर गेमि aroundको वरिपरि विविध ईकोसिस्टम। विविधता तपाइँको ब्रान्डलाई बिभिन्न तरीकाले प्रस्तुत गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्दछ र दर्शकहरूमा पुग्नको लागि तपाइँले पहिले स .्लग्नको लागि संघर्ष गर्नु भएको थियो। भिडियो खेल livestreamer केटाकेटीको सपनाको रोजगार को रूप मा दर्ता छ, livestreaming बजार को आशा गरी 920.3 मिलियन पुग्नुहोस् २०२2024 मा व्यक्ति। ईस्पोर्टको उदय पनि महत्त्वपूर्ण छ; यो पुग्ने आशा छ 577.2 लाख मान्छे उही वर्ष द्वारा।
मिडिया मूल्य को लगभग %०% गैर-खेल ब्रान्ड द्वारा संचालित संग, गेमरहरूलाई मार्केटिंग अपरिहार्य छ। फर्स्ट-मूभर फाइदा महत्वपूर्ण छ कि तपाइँको प्रतिस्पर्धी भन्दा पहिले गेम मार्केटिंग जान्न र बुझ्नको लागि। तर पहिले, तपाईले बुझ्नु पर्छ कि गेमिaming जस्तो देखिन्छ २०२१ मा।
गेमि Aud श्रोता वर्णन गरियो
तपाईं लाग्न सक्नुहुनेछ कि असीमित खाली समयको साथ किशोर किशोरीहरू द्वारा गेमि। हावी छ - तर यो सत्यबाट पछि हुन सक्दैन। Of 83% महिला र% 88% पुरुषहरू गेमर को रूप मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। र जब यो साँचो गेमिंग युवाहरु को बीच सबैभन्दा लोकप्रिय छ, -71१% ५५-55४ बर्ष को बच्चाहरु लाई पनि खेल्छन्। जब यो स्थान को लागी आउँछ, गेमिंग विश्वव्यापी छ। ४५% डेन्सले play२% थाईस बनाम खेल खेल्ने दाबी गरेका छन्, तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाहरु लगातार छन् कडा संलग्नता भएको, जो बजारका लागि महत्वपूर्ण छ। गेमि interests चासो र प्राथमिकताहरू जीवन चरणहरू, जातीयता, र यौन झुकावहरूमा पनि फरक हुन्छन्।
गेमि inमा विविधताको यो स्तरको साथ, यो स्पष्ट परम्परागत स्टिरियोटाइपहरू समात्दैन। तर यसले कसरी तपाईंको गैर-गेमिंग ब्रान्डलाई फाइदा पुर्‍याउँछ? यसको मतलव तपाईले फेला पार्न निश्चित हुनुहुन्छ खेल प्रभावकारीहरू जुन तपाइँको लागि एक प्राकृतिक फिट हो।
गैर-गेमिंग ब्रान्डहरूमा गेमि Inf प्रभावकारीहरूको मूल्य
गेमि influence प्रभावकारीहरू स्वाभाविक रूपमा उद्योग र — निर्णायक — गेमि culture संस्कृति बुझ्दछन्। उनीहरूका दर्शकहरू मर्ने कडा प्रशंसकहरू हुन्, भारी रूपमा स engaged्लग्न छन् र यस्तै प्रकारका सबै चीजहरू खेलमा समेटिएका छन्। गेमि digital डिजिटल छ; गेमरहरू सक्रिय, परिष्कृत मिडिया उपभोक्ताहरू हुन्। अभियान रणनीति जसले तपाईंको लागि परम्परागत रूपमा काम गर्‍यो यहाँ काम नगर्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ तिनीहरूलाई ट्वीक गर्नुहुन्न। यो को कुराकानी हो ट्विच वा यूट्यूबहोइन टिभी वा सोशल मीडिया। खेलहरूमा विज्ञापनको सांस्कृतिक अर्थ बनाउनुपर्दछ वा तपाइँ तपाइँको श्रोतालाई टाढा पार्नुहुनेछ, र प्रभावकारीहरू तपाइँको ब्रान्डको स्थानीय रूपमा प्रचार गर्नको लागि उत्तम तरिका हो।
खेल प्रभावकारीहरूको साथ साझेदारीले तपाईंलाई कसरी पहुँच दिन्छ? बिभिन्न दर्शकहरू जुन अरु कहिँ फेला नपर्न सक्छन् — विशेष गरी समान मापनमा। ट्विच स्ट्रिमहरू प्रायः घण्टा सम्म हुन्छन्, यसको लाइभ च्याट फीचरले स्ट्रिमर र दर्शकहरूको बीच स्थिर संवादको लागि सक्षम गर्दछ। यूट्यूब गेमि hit मा हिट भयो 100 अर्ब २०२० मा हेर्नुहोस् समय घण्टा, लगभग अतुलनीय संख्या। तर यो सबै आकार को बारे मा छैन।
यो गेमिrs प्रभावकारहरूको प्रामाणिकता हो जुन उनीहरूको दर्शकहरूसँग प्रतिध्वनि हुन्छ, अत्यधिक व्यस्त सम्बन्ध सिर्जना गर्दछ। सेप्टेम्बर २०२० मा, गेमि industry उद्योगले यो देखे %% को उच्च औसत सment्लग्नता दर नानो प्रभावकर्ताहरूबाट (१०-१०,०००)। मेगा प्रभावकर्ताहरू (१ लाख वा अधिक अनुयायीहरू) मा दोस्रो उच्च दर 1,000.२%% थियो, सबैभन्दा ठूला गेमिंग सेलिब्रेटीहरूले पनि लगातार उनीहरूको श्रोताको ध्यान आकर्षण गर्न सक्षम छन् भन्ने सुझाव दिन्छन्। गेमि content सामग्रीले व्यक्तिलाई वास्तविक महसुस गर्छ, र नेटिभ उपकरणहरू जस्तै टिभिच कुराकानीलाई विस्तार गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो।
कसरी तपाइँको ब्रान्ड गेमिंग प्रभावकारीहरु संग सहकार्य गर्न सक्दछ
गेमि influence प्रभावकर्ताहरूको साथ सहयोगका विभिन्न तरिकाहरू छन्। तलका प्राथमिक विधिहरू जुन हामी गैर-खेल ब्रांडहरूमा सिफारिस गर्दछौं।
प्रायोजित एकीकरणहरू - ब्रान्ड उल्लेख एक प्रभावकारी को सामग्री मा एकीकृत तपाईंको उत्पाद वा सेवा को सकारात्मक shoutouts छन्। क्लाउटबुस्टले ब्रान्डको जागरूकता र ड्राइभ उत्पाद डाउनलोड, ट्विच प्रभावकर्ताहरूको प्रायोजनको लागि बृद्धि गर्न हटस्पट शिल्ड VPN को अभियान चलायो। यस ट्विच प्रायोजकत्वमा उनीहरूको व्यक्तिगत संघर्षहरूको समाधान गरिएको उत्पाद सञ्चारको साथसाथै उत्पादनको फाइदाहरूबारे छलफल गर्ने काम थियो। प्रायोजनले सस्तो प्रदान गर्‍यो, विज्ञापन ब्यानरहरू र लोगोहरूमा हटस्पट शिल्डको समावेश, र कार्यहरू गर्न नियमित कुराकानी कलको उपयोग गर्‍यो।
एक प्रतियोगी VPN ब्रान्ड, NordVPN, धेरै हदसम्म YouTube मा प्रभावकारी मार्केटिंगमा फोकस गर्दछ। तपाइँ तिनीहरूको ब्रान्ड सम्पूर्ण गेमिंग दृश्यमा पाउनुहुनेछ, साना गेमि influence प्रभावकर्ताहरूबाट PewDiePie सम्म। NordVPN जोड दिन्छ दीर्घकालीन लाभ YouTube को; दर्शकहरूले महिनौं वा बर्ष देखि भिडियो हेर्नको लागि प्लेटफर्मको एल्गोरिथ्म र प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस नयाँ अपलोडहरूमा विशेष रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्दैनन्। यसको तुलनामा, ट्विच र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरू हालको सामग्रीमा केन्द्रित छन्।
LG ले नन-गेमिंग ब्रान्ड लक्षित गेमरहरूको अर्को उदाहरण देखाउँदछ। कम्पनीसँग गेमिंग YouTubers का साथ साझेदारीको ईतिहास छ, हाईलाइट गर्दै कि कसरी LG TV गेमरहरूको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। Daz खेल एक बनाएको LG प्रायोजित भिडियो यसले उत्पादनलाई प्राकृतिक तरिकाले प्रस्तुत गर्दछ, कसरी गैर-गेमिंग ब्रान्डहरूले प्रामाणिक एकीकरण गर्न र नयाँ दर्शकहरूमा पुग्न सक्दछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।
प्रभावशाली सस्ता - giveaways सधैं एक उत्तम तरीका हो तपाइँको ब्रान्ड वरिपरि संलग्नता उत्पन्न गर्न। KFC ट्विच स्ट्रीमरको साथ एक खेल साझेदारी चलायो ब्रान्ड मर्चेंडाइज र गिफ्ट कार्डहरूको लागि दर्शकहरू प्रस्ताव प्रदान गर्न जब उनीहरूले खेल जिते। केएफसी ईमोट टाइप गरेर उपयोगकर्ता प्रविष्ट गरियो (ट्विच-विशिष्ट इमोटिकन्स) ट्वीच च्याटमा, र पुरस्कार खेलिएका अनुसार अनुकूलन-डिजाइन गरिएको थियो। तपाइँको ब्रान्डलाई खेलको अनुरुप उत्पादन जारी गर्नु स्वाभाविक रूपमा यसलाई समाहित गर्ने उत्तम तरिका हो।
गेमि Even घटनाहरू - हर्षेको गेमि'sको सब भन्दा ठूलो वार्षिक घटनाहरू, TwitchCon २०१,, लाई लाभान्वित तिनीहरूको नयाँ रीसको टुक्रा चकलेट पट्टी प्रचार गर्नुहोस्। ट्विचकनले प्लेटफर्मको सबैभन्दा ठूलो स्ट्रिमरहरूलाई एकै छतमा सँगै ल्याएदेखि हर्षेले प्रायोजित निन्जा र ड्रलूपो सहयोगी लाइभ स्ट्रिमको लागि देखाए। यस सक्रियताले व्यक्तिसँगै स्ट्रिमरहरूमा पहुँचको अनौंठो अवसरको फाइदा उठायो, निन्जा र ड्रलूपोको विचारमा खेल्ने सहकार्यको साथ हर्से र रीजजस्ता अचम्मको जोडी हो।
यदि तपाईं आफ्नो ब्रान्ड गेमिंगबाट टाढा हटाइएको विचार गर्नुहुन्छ भने, प्रेरणाको लागि म्याक प्रसाधन सामग्री भन्दा बाहिर नहेर्नुहोस्। म्याकले २०१itch मा ट्विचकनलाई प्रायोजित गर्‍यो, giveaways चलाउँदै, मेकअप अनुप्रयोग सेवाहरू प्रदान गर्दै, र सफल भर्ती महिला स्ट्रिमर जस्तै पोकीमने उनीहरूको बुथमा खेल खेल्न। म्याक एसभीपी फिलिप पिनाटेलले जोड दिए कि कसरी टिचले आफ्नो समुदायमा व्यक्तित्व र आत्म-अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दछ, सुविधाहरू जसले म्याकलाई ब्राण्डको रूपमा परिभाषित गर्दछ।
Esports - एस्पोर्ट्स प्रोफेशनल गेमि ofको एक विशिष्ट क्षेत्र हो जसमा ब्रान्डहरू सम्मिलित हुन सक्छन्। Aldi र Lidl पेशेवर एस्पोर्ट संगठनहरु संग साझेदारी जर्सी प्रायोजित गर्न र संयुक्त सक्रियता मार्फत सामग्री सिर्जना गर्न। Aldi र टीम Vitality एक स्वास्थ्यकर आहार को महत्व को वरिपरि Aldi को कोर ब्रान्ड सन्देश प्रचार गर्न को लागी साझेदारी, प्रदर्शन को लागी Vitality को स्थायी खोज संग जोडेर।
भेट्नुहोस् र अभिवादन गर्नुहोस् - गेमि events घटनाहरू जस्ता, भेट्नुहोस् र अभिवादनहरू डिजिटल संसार बाहिर गेमिंग प्रभावकारीहरूको लाभ उठाउनको लागि एक तरिका प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, जाँच गर्नुहोस् कफनको भेट र Zumiez मा अभिवादन। प्रीमियर गेमि creat सिर्जनाकर्ताहरूसँग व्यक्ति-अन्तर्क्रियामा ठूलो मूल्य सिर्जना गर्दछ र समर्पित समुदायहरूलाई एक साथ ल्याउँदछ।
गेमि Ofको पहुँच
गेमि industry उद्योग अब अनन्य उपसमूह होइन यो एक पटक थियो। गेमि global ग्लोबल हो, र यसले उमेर, लिंग र जातीय क्षेत्रहरूमा फ्यानहरूको फूर्तिशन प्रतिनिधित्व गर्दछ। जबकि गेम ब्रान्डहरू पहिले नै गेम मार्केटिंगमा अविश्वसनीय रूपमा प्रवेश गरीरहेका छन्, गैर-गेमिंग ब्रान्डहरूका लागि पहिले अपराधी श्रोताको लागि ठूला अवसरहरू छन्।
गेमि influence प्रभावकर्ताहरूले गेमि aud दर्शकहरूको पहुँच गर्नको लागि स्ट्यान्डआउट विधि प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाइँको ब्रान्डको वरिपरि रचनात्मक र ब्रान्ड सचेतना र बिक्री उत्पादन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। याद गर्नुहोस् कि गेमरहरू परिष्कृत उपभोक्ता हुन्। यो आलोचनात्मक छ कि तपाइँको खेल प्रभावकारी अभियानहरु उद्योग को लागी बनाईएको छ र विशेष प्रभावहरु को तपाईले चयन।
टैग: क्लाउटबूस्टdaz खेलहरुड्रलूपोEsportsमहिला पुग्नखेल बजारखेल प्रभावकारीगेमि influence प्रभावकारी मार्केटिंगगेमि inte्ग एकीकरणहरूhersheyप्रभावkfclgप्रत्यक्ष प्रसारणप्रत्यक्षप्रवाह गेमिंगनिन्जाnordvpnरिसेसप्रायोजित एकीकरणहरूघाइतेट्विच स्ट्रिमरtwitchconYouTubeयूट्यूब गेमि।जुमीहरु
Polina हरियाचा एक संस्थापक हो क्लाउटबुस्ट, एक डेटा-संचालित, अधिग्रहण-केन्द्रित मार्केटिंग एजेन्सी जसले समान-दिमागका गेमरहरूसँग ब्रान्डहरूलाई एकजुट गर्दछ। उत्पाद मार्केटि,, प्रयोगकर्ताको अधिग्रहण, र मार्केटि analy एनालिटिक्समा दशक भन्दा बढीको अनुभवको साथ, पोलिना टेकक्रन्च, एडएक्स्चेन्जर, एडवीक, र अन्य उद्योग मिडियामा चित्रित एक प्रसिद्ध विज्ञ हुन्। उनी शीर्ष डिजिटल मार्केटि conven सम्मेलनहरूमा पनि वक्ता हुन्, डिजिटल समिट र पबकॉन सहित, जहाँ उनी मोबाइल, पीसी, र कन्सोल गेमहरू सुरूवात र बृद्धि गर्नमा आफ्नो विशेषज्ञता साझेदारी गर्छिन्।
ईमेल प्रिहेडर थपेमा मेरो इनबक्स प्लेसमेन्ट दर १ Rate% ले वृद्धि भयो
एक्टिभ क्याम्पियन: किन ट्याग गर्ने तपाईंको ब्लगको लागि आलोचनात्मक हुन्छ जब यो आरएसएस ईमेल एकीकरणमा आउँदछ